ဉာဏ်စမ်းပဟေ:ိ - ဤတိရိစ္ဆာန်များ၏ထူးထူးခြားခြားစုပေါင်းထားသောနာမ်များကိုသင်အမည်ပေးနိုင်ပါသလား။ - သတင်း
ဉာဏ်စမ်းပဟေ:ိ - ဤတိရိစ္ဆာန်များ၏ထူးထူးခြားခြားစုပေါင်းထားသောနာမ်များကိုသင်အမည်ပေးနိုင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနွေရာသီများတွင်နေထိုင်ရန်အစားပြင်ပမှ Corona နှင့်အတူကခုန်ခြင်း၊ သာမာန်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးမက္ကစီကိုကိုဝတ်ဆင်ခြင်း ‘ကျွန်ုပ်ကိုပစ်ချလိုက်ခြင်း! ဟေ့! 'ငါတို့အများစုသည်ဆိုဖာပေါ်တွင်ထိုင်။ ဂျယ်ရမီ Kyle ကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများအားသူတို့၏နွေရာသီအလုပ်များတွင်အပြီးသတ်နိုင်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။
ဖြုန်းတီးသောအချိန်အဆိုးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Come Dine With Me တွင်ဒက်ဘီ၏မီးရှို့ထားသောဘရန်ဒီသည်သင့်စိတ်ကိုဖယ်ရှားနေစဉ်အဘယ်ကြောင့်အချို့သောကြိုတင်အရက်ဆိုင်ပဟေquိပြင်ဆင်ခြင်းကိုလုပ်မလဲ။ ဤစမ်းသပ်မှုကိုတိရစ္ဆာန်အုပ်စုများကိုကြိုးစားပြီးလူတိုင်းကိုသင်၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်အသုံးမကျသောအထွေထွေဗဟုသုတဖြင့်အထင်ကြီးစေပါ။
လမ်း ၂ သွား Bargain Hunt မှသင်သင်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။